I-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + zifumana i-beta ye-UI enye esekwe kwi-Android Pie: uyifaka njani | I-Androidsis
Ngexesha leNkomfa yoPhuculo lweSamsung ekuqaleni kwale nyanga, Isamsung yazisa umsebenzisi wayo omtsha, Samsung One UI, kwaye ithe izakufumaneka kungekudala kwi-beta yezixhobo ezikhethiweyo.
Emva kwale, Inkqubo enye ye-UI Beta sele iqalile kubasebenzisi be Galaxy S9 kunye S9 Plus eMzantsi Korea naseMelika. Kukwalindeleke ukuba ifumaneke kwakamsinya eJamani, eYurophu naseAsia. Nangona kunjalo, ingxelo ezinzileyo ye-Samsung One UI esekwe kwi Android Pie Iya kufumaneka ngoJanuwari wonyaka olandelayo.
Uhlaziyo, olumalunga ne-1,896 MB ngobukhulu, izisa iPie ye-Android kumgca ophambili weSamsung kunye nazo zonke izinto zokuphucula i-UI, zombini kwisebe lembonakalo kunye nazo zonke izinto. Kuza nesikhuselo sikaNovemba sokhuseleko se-Android.
1 I-UI enye, umaleko omtsha we-Samsung osekwe kwiPie ye-Android
2 Uyifaka njani i-beta ye-UI enye kwi-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +
I-UI enye, umaleko omtsha we-Samsung osekwe kwiPie ye-Android
I-UI enye izisa amanqaku amaninzi, ezinje ngombonakalo owenziwe ngokutsha, izaziso ezenziwe ngokutsha ezinamandla okuphendula ngokuthe ngqo ukusuka kwipaneli yesaziso, i-Unicode 11.0 emojis, imixholo ephendulayo, ukhathalelo lwezixhobo, izixhobo zokonga umbane, iindlela ezintsha zewotshi zoBoniso oluhlala luhleli, uphuculo oluphuculweyo oluvela kwi-Bixby usetyenziso lwefowuni, kunye nokunye.
Isamsung yazisa kwakhona Imowudi yasebusuku ebanzi yenkqubo, eyenza umxholo omnyama, ohambelana ne-AMOLED kuyo yonke i-UI ye-Samsung kunye neeapps.
Xa kuthelekiswa namava eSamsung ye-UX, efuna ukuba zisebenze izandla ezimbini, ibango lokuba i-UI entsha yakhelwe iimeko zokusebenzisa ngesandla esinye. Isamsung yatsho ukuba besisebenza kumava amatsha kunyaka ophelileyo, kwaye eyona njongo iphambili kukwenza ukuba ujongano lungabinazinto zininzi.
Injongo ye Samsung One UI kukugcina owona mxholo ubalulekileyo kweyona ndawo iluncedo kakhulu: ezantsi kwesikrini. Zonke iiapps zeSamsung zamkele ubeko lwebar esezantsi yezinto ezincinci zokuhamba kunye nezinto ezinkulu zentloko. Imenyu ikwakhona emazantsi kwesikrini endaweni yeziko.
Uyifaka njani i-beta ye-UI enye kwi-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +
Ukufumana uhlaziyo lwe-beta ye-UI enye, kuya kufuneka ubhalise kwinkqubo ye-UI ye-Beta ngokusebenzisa i-Samsung Amalungu / i-Samsung + isicelo ngokucinezela iqhosha elithi "Izaziso". Kamva, ulwakhiwo olutsha lwePie Android kufuneka lukhutshelwe ukungena Cwangcisa > Uhlaziyo lwesoftware > Khuphela uhlaziyo ngesandla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + zifumana i-beta ye-UI enye esekwe kwi-Android Pie: uyifaka njani